US says worried by Zim abductions, urges political dialogue - NewZimbabwe.com US says worried by Zim abductions, urges political dialogue - NewZimbabwe.com
US says worried by Zim abductions, urges political dialogue
“We welcome the Zimbabwean government’s commitment to investigate these crimes and to bring those responsible to justice. We encourage those Zimbabweans who wish to seek redress before their government to do so peacefully,” read part of the statement.
“The ongoing polarization in Zimbabwean society, as identified by the (former South African President Kgalema) Motlanthe Commission and the Zimbabwe Council of Churches, underscores the urgent need for a broad-based and inclusive national dialogue.
“Such a dialogue, coupled with political and economic reforms, holds the promise of a more prosperous and successful Zimbabwe,” the US added.
Political activist Pride Mkono and MDC youth leader Cecilia Chimbiri were on Thursday summoned by police in connection with the MDC’s planned demonstration.